खाडीका ६ देश र मलेसियामा काेराेना सङ्क्रमणकाे पछिल्लाे अवस्था | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
खाडीका ६ देश र मलेसियामा काेराेना सङ्क्रमणकाे पछिल्लाे अवस्था
विदेशमा रहेका कोरोना सङ्क्रमित नेपालीमध्ये ९७ प्रतिशत निको
(नाेट : खाडीका देश र मलेसियाको पछिल्लो कोरोना अपडेट हप्तामा एक पटक आइतबार हुन्छ । खाडीका देश र मलेसियामा रहेका सङ्क्रमित नेपालीको सङ्ख्या भने नेपाली दूतावास वा गैरआवसीय नेपाली संघ एनआरएनएले सार्वजनिक गरेका बेलामा मात्र अपडेट हुन्छ । यो अपडेटमा त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेका सङ्क्रमित नेपालीकाे सङ्ख्या​ र गैरआवसीय नेपाली संघ एनआरएनएको तथ्याँक समावेश गरिएको छ । )
काठमाण्डाै – फागुन ९ गतेसम्म विभिन्न ५० देशमा रहेका ६० हजार ६३० जना नेपाली कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् । यसमध्ये ९७ प्रतिशत अर्थात् ५९ हजार १२० जना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएकाे गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएकाे स्वास्थ्य समितिले जनाएकाे छ । विदेशका विभिन्न २१ देशमा ३ सय ३६ नेपालीकाे काेराेनाकाे कारण ज्यान गएकाे छ ।
खाडीका ६ देश र मलेसियामा अहिलेसम्म १६ लाख २८ हजार ५६८ जनामा काेराेना सङ्क्रमण भएकाे छ । जसमध्ये १५ लाख ३५ हजार ३८९ जना निकाे भइसकेका छन् भने ८१ हजार २७६ जना उपचाररत छन् । यी देशमा काेराेनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे सङ्ख्या ११ हजार ९०३ जना पुगेकाे छ ।
फागुन ९ गतेसम्म विश्वका दुई सय १९ देशका ११ कराेड १७ लाख १२ हजार १८९ जनामा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ । २४ लाख ७३ हजार ५२३ जनाको ज्यान गएको छ भने ८ कराेड ६९ लाख ४२ हजार १८७ जना निको भएका छन् ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : १ लाख ५९ हजार ९६७ जना । ( २८ हजार २५० नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : १ लाख ४९ हजार ७४० जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ९ हजार ९७१ जना ।
मृतकको संख्या : २५६ जना ।
( नाेट : माथि समावेश गरिएकाे सङ्क्रमित ​नेपालीकाे तथ्याँक गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिकाे हाे ।)
अब कतार जाने यात्रुले सुर्तीजन्य पदार्थ लैजान नपाउने
कतार : कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी सुरक्षाका उपाय नअपनाए रियाल दुई लाखसम्म जरिवाना
भिसा सम्बन्धी व्यवस्था
- कतार सरकारले पासपोर्टको म्याद नाघेको एक वर्षभित्र कतारी आईडी एक वर्षका लागि नवीकरण गरिदिने र भिजिट भिसा पनि निश्चित अवधिका लागि नवीकरण गर्न सकिने भएकाे छ । अब पासापेर्टको म्याद सकिएको एक वर्ष ननाघेका नेपालीहरुले कतारी आईडी र भिसा सजिलै नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
- कतार आईडीको म्याद थप्न वा अवस्था थाहा पाउन metrash2एप्लिकेसन प्रयोग गर्न र थप नयाँ सूचना तथा जानकारीका लागि कतारको आन्तरिक मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्नुहोस् ।
- यो समयमा भिसाको म्याद थप्न वा भिसाको अवस्था htpps://portal.moi.gov.qa/visitvisaextension बाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
सम्पर्क गर्नुहाेस् :
सङ्क्रमित सङ्ख्या : ३ लाख ७० हजार ४२५ जना । ( ५ हजार ३५० नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : ३ लाख ५९ हजार ६९७ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ९ हजार ६०३ जना ।
मृतकको संख्या : ११ सय २५ जना ।
समस्यामा हुनुहुन्छ ? दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहाेस् :
भिजिट भिसामा यूएई आएर काम नगर्न दूतावासको आग्रह
माहामारी नयाँ नियम
- कोरोनाको नयाँ सङ्क्रमित थपिँदै गएपछि यूएईको रसअलखेमामा मार्च ५ सम्म कुनै पनि ठूला कार्यक्रमहरु,सभा सम्मेलन गर्न नपाइने नियम लागू भएको छ । अजमानमा पनि मार्चको अन्त्यसम्म कुनै पनि कार्यक्रमहरु गर्न पाइने छैन ।
- रसअलखेमाका सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्नका लागि पनि अब कोरोना विरुद्धको दुवै डोज खोप लगाएको हुनपर्नेछ ।
- काेराेना महामारीका कारण यूएईमा समस्या परेकाे छ ? छ भने समस्याका बारेमा दूतावासलाई जानकारी गराउनुहाेस् ।
- यूएईको Ministry of Health and Prevention (मिनिस्ट्री अफ् हेल्थ एण्ड प्रिभेन्सन) ८००११११ र दुबई हेल्थ अथोरिटीमा ८००३४२ मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अवस्थाको जानकारी दिएर आवश्यक सहयोग लिनुहोस् ।
- आबुधाबीमा रहेको नेपाली दूतावासको ०२६३४४७६७ र ६३४४३८५ नम्बरमा सम्पर्क गरेर आवश्यक सहयोग लिन सकिन्छ ।
- कुनै स्वास्थ्य समस्या देखा परेमा यूएईको स्वास्थ्य सेवा विभाग आवुधावीमा ८००१७१७ मा सिधै सम्पर्क गर्नुहोस् ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : ३ लाख ७४ हजार ६९१ जना (५ हजार ८ सय जना नेपालीसहित) ।
निको भएर घर फिरेकाहरु : ३ लाख ६५ हजार ७४५ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : २ हजार ४८९ जना ।
मृतकको सँख्या : ६ हजार ४५७ जना ।
- साउदी अरबमा अप्रिल ४ सम्म कुनै पनि सभा सम्मेलन भेला गर्न पाइने छैन ।
साउदीमा ५० जनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला हुन नपाउने, नियम उल्लङ्घन गरे १५ हजार रियाल जरिबाना
दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहाेस्:
- साउदीमा काेराेना सङ्क्रमणको शङ्का लागेमा तुरुन्तै सरकारले उपलब्ध गराएको हेल्थ सर्भिस सेन्टरको सम्पर्क नम्बर ९३७ मा फोन गरी सल्लाह र परामर्श लिनुहोस् ।
- अत्यावश्यक सहयोग, सल्लाह र समस्या राख्न साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासको ०११४६१११०८ नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् । बिदाको दिन अथवा कार्यालय समयभन्दा अघि र पछि बेलुका ८ सम्म दूतावासको हटलाइनमा ०५५९३८९६०० नम्बरमा (whatsapp) समेत यसै फोनमा उपलव्ध छ) सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : १ लाख १७ हजार २३४ जना । ( ४५१ जनाभन्दा धेरै नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : १ लाख ९ हजार ८५ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ७ हजार ७ सय २९ जना ।
मृतकको सङ्ख्या : ४२० जना ।
(नाेट : माथि उल्लेखित सङ्क्रमित नेपालीकाे सङ्ख्या एनआरएनए अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिकाे हाे । )
- ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता काेराेनासँग मिल्दोजुल्दा लक्षण देखिएमा बहराइनको टोल फ्री ४४४ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
- कुनै समस्या परेमा बहराइनमा रहेको नेपाली दूतावासमा ९७३१७७२५५८३, ४१६११३६, ३५४२७७१७, ३५५४७९५१, ३६७८१५८८, ३७११४५७० मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
काेराेना सङ्क्रमित सङ्ख्या : १ लाख ८३ हजार ३२२ जना । ( २३ सय ५० जना नेपालीसहित)
काेराेना निको भएर घर फिरेकाहरु : १ लाख ७१ हजार २६० जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ११ हजार २३ जना ।
काेराेनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या : १ हजार ३९ जना ।
कुवेतले ल्याएकाे नयाँ नियम
- फेब्रुअरी २१ भन्दा पछि कुवेत जाने यात्रुले अनिवार्य सात दिन होटेल क्वरेण्टीनमा बस्न पर्नेछ ।
- काेराेनाका कारण समस्या परेकाे छ र स्वदेश फर्कन चाहनुहुन्छ या दूतावासबाट सहयाेग चाहिएकाे छ भने दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहाेस् ।
- कुवेत सरकारले निर्देश गरेको सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुहोस् ।
- स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै समस्या भएमा २४९७०९६७ नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस् । कुवेत सरकारले जारी गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशनहरु पालना गर्नुहोस् ।
- कुनै समस्या परेमा कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासको फोन नम्बर ००९६५२५३२१६०३ मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : १ लाख ३९ हजार ३६२ जना ।( ३ सय जना नेपालीसहित ।)
निको भएर घर फिरेकाहरु : १ लाख ३० हजार ६५३ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ७ हजार १५७ जना ।
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या : १५ सय ५२ जना ।
७२ घण्टाभित्रको कोरोना नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट नभइ ओमान जान नपाइने
ओमानमा 'गैरकानुनी' भएका नेपालीलाई जरिवाना नतिरेरै घर फर्किन पाउने अवधि थप
- काेराेनाकाे लक्षण देखापरमा सिधै कोभिड १९ को परीक्षण नभई चिकित्सकको सिफारिसपछि मात्र राष्ट्रिय प्रयोगशालामा यसको निःशुल्क परीक्षण हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाबारे थप बुझ्न परेमा हटलाइन १२१२ वा २४४४१९९९ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
- सार्वजनिक ठाउँमा भिडभाड नगर्नुहोस् र सुरक्षित भएर बस्नुहोस् । ओमान सरकारले निर्देश गरेको वा कम्पनीको निर्देशन पालना गर्नुहोस् ।
- कुनै समस्या परेमा कोरोना विशेष हटलाइन नम्बर ७१५३०८४० मा अथवा ९६८२४६९६१७७ मा सम्पर्क गरेर सहयोग लिन दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : २ लाख ८३ हजार ५६९ जना ।(२१०० जना नेपालीसहित ।)
निको भएर घर फिरेकाहरु : २ लाख ४९ हजार २०९ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ३३ हजार ३०४ जना ।
मृतकको सङ्ख्या : १ हजार ५६ जना ।
मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँकाे सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने बाटो खुला
मलेसियामा विदेशी श्रमिकको कोरोना उपचार र क्वरेण्टीन खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने
यी कुरामा ध्यान दिनुहाेस् :
- मलेसियामा पछिल्लाे समय सङ्क्रमण निकै बढेकाे छ । काेराेना सङ्क्रमणबाट बच्न सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुहाेस् ।
- मलेसिया सरकारले फेरि लकडाउन गरेकाे छ । लकडाउनकाे अविधमा मलेसियाले लागू गरेका नियमहरु मान्नुहाेस् ।
मलेसियामा आफ्ना श्रमिकको कोरोना परीक्षण नगर्ने रोजगारदातालाई कारबाही हुने
- कोरोनाको कारण कम्पनीमा या बासस्थानमा कुनै समस्या भएमा पनि दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहाेस् ।
- सुरक्षा सतर्कताका लागि सरकारको निर्देशन र सल्लाहबारे बेला बेलामा जानकारी लिनुहुोस् । कुनै समस्या परेमा मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासमा ६०३२०२०१८९९ र ६०२०२०१८९८ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।